केपी शर्मा ओलीको मिर्गौलामा खराबी, मिर्गौलाको सूक्ष्म रुपमा परीक्षण गरिने – Samacharpati
शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढी देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप परीक्षणका गर्न बिहीबार अपराह्न सिंगापुरतर्फ गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा मिर्गौलाको कार्यक्षमता र औषधिको प्रभाव सम्बन्धमा परीक्षण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि १० दिन (साउन १८ गतेदेखि २७ गतेसम्म) सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । एन्टिबडीलाई शरीरबाट निष्कासन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधिलाई निरन्तरता दिन उनी पुनः सिंगापुर जानुपरेको डा. दिव्यासिंह शाहले बताइन् । डा. शाह सिन ओलीसँगै सिंगापुर गएकी छन् ।
६७ वर्षीय ओलीको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञसमेत रहेकी निजी चिकित्सक डा. शाहका अनुसार ओलीको शरीरमा मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडीको मात्रा केही बढी देखिएको छ । एन्टिबडी बढ्दा प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको संकेतका रुपमा लिनुपर्ने मिर्गौला रोग विशेषज्ञको भनाइ छ ।
मिर्गौलाको क्रियटिनिनको मात्रा पनि सामान्यभन्दा केही बढी देखिएको अर्का निजी चिकित्सक डा. शर्माले जानकारी दिए । क्रियटिनिनको मात्रा सामान्य अवस्था १.५ भन्दा बढी अर्थात् २ को हाराहारीमा छ । ‘मिर्गौलाले काम गर्न छोड्दैछ भन्नका लागि क्रियटिनिनलाई मात्र एउटा आधार बनाएर हुँदैन । मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा धेरै आधार पनि जोडिएका हुन्छन्,’ डा. शर्माले भने ।
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार दुईवटा कारणले क्रियटिनिन बढ्छ । एउटा तत्काल कोष बढेर देखिने समस्या (सेलुलर रिजेक्सन) र दोस्रो, एन्टिबडी बढेर पनि समस्या हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको एन्टिबडीको मात्रा घटाउन सके मिर्गौला बिग्रने क्रम तीव्र नभई सुस्त गतिमा हुने डा. काफ्लेको भनाइ छ । अब गरिने उपचारबाट मिर्गौलाको स्थितिबारे प्रस्ट हुन सकिने चिकित्सकहरूले बताए । उपचारपछि एन्टिबडीको लेभल घट्छ–घट्दैन र क्रियटिनिन नर्मल लेभलमा आउँछ–आउँदैन भन्ने परीक्षणले नै धेरै कुरा निर्धारण हुने डा. काफ्लेको भनाइ छ ।
अत्याधुनिक प्रविधिको उपचारबाट स्वास्थ्यलाभ हुन सक्ने डा. काफ्लेले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न सिंगापुर जान सल्लाह दिइएको निजी चिकित्सक डा. शर्माको भनाइ छ ।